Qoor-Qoor muxuu caawa sheegi doonaa? | KEYDMEDIA ONLINE
Qoor-Qoor muxuu caawa sheegi doonaa?
Waxaa caawa qorsheysan qabashada munaasabad hore u baaqatay oo lagu maamuusayo sanad-guurada koobaad ee ka soo wareegtay markii la dooratay Madaxwynaha Galmudug Qor-qoor.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Munaasabaddan ayuu qorshuhu ahaa in la qabto 2 February 20121, waxayse u baaqatay shirkii wada-tashiga qaran ee xilligaas ka socday magaalada kaas oo aan waxba kasoo bixin.
Inkastoo Qoor-qoor iyo kooxdiisa ay ka dhaadhacsan tahay in ay yihiin Malaa’ig maamulka degaanadaas loo soo diray, hadana tan iyo markii loo doortay hoggaanka Galmudug, waxa ay ku fashilmeen gudashada waajibaad walba oo igmaday.
Keydmedia Online waxa ay wax qabad la’aanta Qoor-qooq ku lafa gurtay qoraalladii soo kala baxay Labadii iyo Saddexii bishaan billowga ah, kuwaas oo kala ahaa Maamulka Qoor-Qoor Sanad kadib, iyo Qoor-Qoor maxaa kuu qabsoomay? Kuwaas oo lagu soo bandhigay fashilka uu dhex taagan yahay hoggaanka Galmudug.
Waxa kaliya ee dadka degaannada Galmudug ay hoos harsan jireen wuxuu ahaa amniga, oo inta badan magaalooyinka maamulkaas waxaa mar hore laga xoreeyay Kooxda Al-Shabaab, marka laga yimaado degaannada Koofureed ee maamulka.
Hayeehsee muddada sanadka ah oo uu joogay Qoor-qoor Galmudug, waxa ay Kooxda Al-Shabaab geysteen falalkii amni darro ee ugu waaweyna, waxa ay dib u qabsadeen maagaalooin laga xorreryay Toban sano ka hor.
Amniga Caasmidda Galmudug ayaa noqday mid aan la isku hallayn karin, waxayna Al-Shabaab u geystaan duqeyn xilligii ay doonaan, waxaa kala go’ay isku socodkii qaar kamid magaalooyinka Maamulka, waxaa ay laayeen saraakiil ka tirsan maamulka oo uu ugu danbeeyay Taliyihii Ciidanka NISA ee Dhuusamareeb Cabdirashiid Cabdinuur Sheekh-Doon iyo askar la socotay oo maanta lagu dhameeyay inta u dhaxeesa Dhuusamreeb iyo Ceeldheere.
Isla maanta ciidamo ka tirsan maamulka Qoor-qoor oo ku sugnaa Degmada Matabaan ayaa la soo raacdeyay, ciidamo gadoodsan oo ka tirsanaa maamulkii Ahlu-Sunna ayaana qabsaday magaalada.
Aanooyinka qabiilka ayaa caadda sare maraya meel kastana dagaal ayaa ka holcaya, degaannada Galmudug kama shaqeeyo Shilinka Soomaaliga taas oo keentay sicir-barar baahsan iyo hoos u dhac lixaad leh oo ku yimid ganacsiga ka jira maamulkaas, taas oo Qoor-qoor uusan waxba ka qaban.
Hadaba marka caawa uu Qoor-qoor koro Marsaxa qodbada muxuu sheegi doonaa? Ma wuxuu ku doodi doonaa kuwii isoo dirsaday ayaan u daneeyay? Mise calool-xumada Galmudug taalla ayuu ka cudur daaran doonaa?